ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံဗီဒီယို — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
မင်းတုံး • ဇူလိုင်လ 28, 2015 တွင် 1:41 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
SWEET အောင်ပွဲ!!!!!!!!!!!! ဒီယို Love.
Natangwe • ဒီဇင်ဘာလ 18, 2015 တွင် 7:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
နမီးဘီးယား '' သင် Fam ခစျြ။.
MAKAY ထံမှ • ဇူလိုင်လ 28, 2015 တွင် 1:53 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျွန်တော်ဒီသီချင်းကိုကြိုက်တယ်. ur ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆော်မှု
တိရဇ • ဇူလိုင်လ 28, 2015 တွင် 1:55 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်တို့သည်ငါတို့၏သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်မင်းကြီးသည်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အရာနှင့်အတူအခြားအယ်လ်ဘမ်ထုတ်ချပြီးအဘို့ခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံငါ့နှလုံးမချဉ်းမကပ်နဲ့ချစ်လှစွာသောဖြစ်ပါသည်. Plano အတွက်ဖျော်ဖြေပွဲမှာ, TX, ဒီသီခငျြးကိုအဆိုပါဖျော်ဖြေပွဲစဉ်အတွင်းတစ်ကိုးကှယျမှုသီခငျြးတူခံစားခဲ့ရနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကဖွစျကွီးကိုဝတျပွုခွငျးအချိန်. ကိုယ်တော်အားချီးမွမ်းနှင့်ဂုဏ်ပြုခြင်းသိမ်းဆည်းထားပါ!!
Valerie • ဇူလိုင်လ 28, 2015 တွင် 2:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
DerrickMichaelWilliams • ဇူလိုင်လ 28, 2015 တွင် 2:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်သည်သင်၏ရိုးသားမှုများအတွက် Lee ကခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဤအယ်လ်ဘမ်ဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးအချိန်ကာလအတွင်းငါ့ကိုအားပေးတယ်. ဒါကအယ်လ်ဘမ်အပေါ်မှာငါ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုတစ်ခုဖြစ်သည်. #SweetVictory
“ရှငျဘုရငျမှ Toast, မျက်နှာကျက်မှသောင်းသောင်းဖျဖျ, ကောင်းသောကျနော်တို့ finish ကိုကအောင် '' gon Feeling
သငျသညျအကြှနျုပျကိုနားထောငျတျော, သငျသညျအကြှနျုပျကိုခံစားရလျှင် holla, ကျနော်တို့ဆဲကျွန်တော်တို့ limping ပင်သော်လည်းအပြေး
Carlton • ဇူလိုင်လ 28, 2015 တွင် 6:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါနဲ့ကားကိုကိုယ်စားပြုသလဲ “ခရစ်ယာန်အသက်တာ” သို့မဟုတ်ပါကကိုယ်စားပြုထားဘူး “ယရှေုသညျ”? သို့မဟုတ်ပါကနှစ်ဦးစလုံးကိုကိုယ်စားပြုသလဲ? တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ဗီဒီယိုမျက်ရည်ငါ့ကိုဆောင် သွား..
Carlton • ဇူလိုင်လ 28, 2015 တွင် 6:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Keinya • စက်တင်ဘာလ 7, 2015 တွင် 10:28 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီဗီဒီယိုကို Love. အမြားအပွားအဆင့်ဆင့်အပေါ် symbolic! သငျသညျအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်…အဘယ်အရာကိုသင်၌ဘုရားသခင်မှတဆင့်မနက်ရှိုင်းစွာခံစားမိနေပါတယ်.
ManuelAdams • စက်တင်ဘာလ 16, 2015 တွင် 11:57 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့်အစမ်းသပ်မှုတွေမှတဆင့်ဧဝံဂေလိတရားကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အောင်ပွဲခံ၏ဗဟိုဆောင်ပုဒ်ဒီတော့ယနေ့လိုအပ်. ကြှနျုပျ၏ပဌနာများစွာသောလူကဒီသီခငျြးကိုနှင့်ဗီဒီယိုများတွင်ပုံဖော်မရှိမဖြစ်အိမ်ငှားဘက်လျက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ. ဘုရားသခင်သည်သင်၏လက်ဆောင်များမှတဆင့်အနေနဲ့သက်ရောက်မှုစေရန်သင့်အားအတုယူအားဆက်လက်နိုင်ပါစေ.
နစ်ခ် • စက်တင်ဘာလ 18, 2015 တွင် 7:14 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, သငျသညျနညျးလမျးမြားအများကြီး၌ငါ့ကိုထိခိုက်ပါဘူး. လူအပေါငျးတို့သညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားပြန့်ပွားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသည်သင်တို့၏အလုပ်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့ဆိုရရန်ရှိသည်ကိုချစ်. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!
Leslie အပြုသဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှု • နိုဝင်ဘာလ 6, 2015 တွင် 9:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်သိမ်းဆည်းထားပါ!….သင့်ရဲ့ဂီတငါ့အသက်ကို၌ငါ့အမှောင်အချိန်လေးမှတဆင့်ကူညီ. ဝိညာဉျကိုရှာဖွေ. #တက်
Little ကဂျယ်ရီ • ဇန္နဝါရီလ 10, 2016 တွင် 12:06 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂျိုအန်း • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 12, 2016 တွင် 4:21 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံ!!! ဆောင်းရာသီ Jam 2016 နို့, TN. သင်နှင့်အတူကိုးကွယ်ဖို့မစောင့်နိုင်သ!
BrendaHohensee • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2016 တွင် 11:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ကိုငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမှတဆငျ့သှားရုန်းကန်မှုများစဉ်းစား လုပ်. ကပိုဆိုးရတဲ့ထားရှိမည်ဘယ်လိုပေမယ့်ဖွင့်မပေးနဲ့အဆုံးယေရှု၌ရှိသောကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်အျောဟစျပါ၏’ ငါ့ကိုချွေတာကျေးဇူးတရား!!!
Jesudunsin စတီဖင် • ဧပြီလ 19, 2016 တွင် 2:10 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Kianna • မေ 20, 2016 တွင် 4:12 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤဗီဒီယို၏အယူအဆဟာအလွန် Related ဖြစ်ပါသည်. ငါကစောင့်ကြည့်ပျော်မွေ့.
Patrick • မေ 23, 2016 တွင် 11:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ soooo သူကပြောတယ်အများကြီးဒီတေးသွားကိုကိုချစ်! ပြန်ကန် hits ရေတွက်လို့မရပါဘူး.
Jon Westra • ဇူလိုင်လ 1, 2016 တွင် 2:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာအံ့သြဖွယ်သီချင်းဖွင့်, ငါ့ကိုမှားမရကြဘူး, သို့သော်သင်တကယ်စကားလုံးသုံးစွဲဖို့ရှိသည်ခဲ့ပါ “အဆိုပါ **” ဒါကြောင့်ကိုဖော်ပြရန်?
KIANNA • ဇွန်လ 26, 2016 တွင် 1:28 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
လူသား, ငါသည်ဤသီချင်းမှစာသားပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အချိန်ကိုလုယူ. ငါ့ကိုပဲငါသီချင်းနောက်ကွယ်မှသတင်းစကားကိုချစ်ဆိုပါစို့. အဆုံးစွန်အောင်ပွဲခရစ်တော်သည်အသေခံသောသေခြင်း. ဟုတ်ကဲ့, သူကွယ်လွန်သွားပေမယ့်အာဏာအားလုံးကိုနှင့်အတူမြင့်တက်. ခရီးစဉ်လီ, ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ!!!!!!!!!!!!!
JordanLivada • နိုဝင်ဘာလ 21, 2017 တွင် 9:58 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
DOPE!!! ဒီတော့ကြောက်မက်ဘွယ်, ဘုရားသခငျ၏တ sooooooooooo ကောင်းသော. မင်္ဂလာသခင်ဘုရား၏နာမ၌ကြွလာသောသူသည်! :) ဝိုး, သငျသညျဆုတောငျးခကျြလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါ့ကိုသိပါစေ, မည်သူမဆို. :) သူကပြန်ပြောမည်!